Firefox Reality 12 inouya nerutsigiro rwekuwedzera, kugadzirisa zvakakwana uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veMozilla vakaburitswa mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani ye Firefox Chaicho 12, zvinova bhurawuza rakazvitsaurira kune chaiwo masisitimu.
Firefox Reality yakashongedzwa muchimiro chekushandisa yeiyo Android chikuva uye inowanikwa kune ngowani 3D Samsung Gear VR, Oculus Go, VIVE Focus, HoloLens 2 uye Pico VR.
Bhurawuza inoshandisa yakazara Quantum webhu injini, asi inopa a matatu-mativi emushandisi interface zvakasiyana zvachose izvo zvinobvumidza kufamba kuburikidza nemasaiti mukati mepasirese pasirese kana sechikamu cheakawedzera chaiwo masisitimu.
Pamusoro pechinongedzo chekutonga kuburikidza neheti ye3D, iyo inokutendera kuti utarise echinyakare maviri-mativi mapeji, bhurawuza rinopa vanogadzira webhu WebXR uye WebVR APIs neVR zvinowedzerwa zveWebhu yeGL neCSS, izvo zvinobvumidza kugadzira matatu-mativi ewebhu maapplication ekubatana munzvimbo chaiyo uye kushandisa nzira nyowani dzekufambisa dze3D, nzira dzekuisa ruzivo uye mapindiro ekutora ruzivo. Iyo zvakare inotsigira kuona 360-degree nzvimbo mavhidhiyo pane 3D ngowani.
Kudzora kunoitwa kuburikidza nevatungamiriri veVR uye kupinda kwedhata mumafomu ewebhu kuburikidza neyakajeka kana chaiyo keyboard.
Iyo yepamusoro browser-inoenderana mushandisi ruzivo zvakare inomira senge izwi rekuisa system, ichikubvumidza iwe kuzadza mafomu uye kuendesa tsvakiridzo uchishandisa Mozilla yekutaura yekuziva injini.
Sezvo peji rekumba, bhurawuza rinopa chinongedzo chekuwana zvakasarudzwa zvemukati uye kutarisa muunganidzwa wemitambo, webhu kunyorera, mamodheru e3D, uye mavhidhiyo emuchadenga akafananidzwa ne3D helmet.
1 Main nyowani maficha eFirefox Reality 12
Main nyowani maficha eFirefox Reality 12
Mune iyi vhezheni nyowani yakapihwa ye Firefox Reality 12, inomira pachena basa rakaitwa kuti ukwanise kuwedzera kutsigirwa kwekuwedzera-ku-browser, nazvo izvo zvino zvichakwanisika kuwedzera nekuvandudza basa racho, kuwedzera pakuve nehumwe hunhu nekuda kwaro.
Pari zvino rutsigiro ruripo rwekuwedzera-ons ayo atovepo kare ekumisikidza: uBlock, Dark Reader, HTTPS Kwese, uye Yakavanzika Badger.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndiye yakagadzirisa kugona kuzadzisa zvirimo zvemafomu ewebhu, kusanganisira kuchengetwa kwemapassword akapinda.
Pamusoro pazvo, zvinotaurwa zvakare mukuzivisa kuti dhizaini yeraibhurari yakashandurwa, iyo inopa interface yekuwana mabhukumaki, nhoroondo yekuvhura, kurodha pasi uye mawedzero, nekuti nazvo Zviratidzo zvebetsero zvakawedzerwa kubhawa remamiriro, seyero yebhatiri mune inodzora uye VR headset, pamwe nenguva iripo.
Pakupedzisira, zvakare mushambadziro kugadziriswazve kwemukati sosi (feed) inomira yekufambisa nyore uye kuwanikwa kwehukama zvirimo zvakarongedzwa nezvikamu mumenyu kuruboshwe.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Kune avo vanofarira kugona kuyedza bhurawuza, vanofanirwa kuziva izvozvo Firefox Reality 12 inowanikwa izvozvi muzvitoro zveHTC, Pico neOculus.
Munyaya ye Vashandisi veApple vanozokwanisa kuwana iyo browser mukati meiyo PlayStore. Kunze kwekuyedza isina ngowani ye3D, iyo navigator inogona kuvhurwa pane Android-based smartphone.
Iyi ficha-yakazara vhezheni yeFirefox Reality ichave yekupedzisira yakakosha ficha kuburitswa kwechinguvana apo isu tichigadzirira kune yakadzika investa muHub. Asi usazvidya moyo! Firefox Reality ichaenderera ichitsigirwa uye nekuchengetedzwa pane yako yaunofarira yakamira VR chikuva.
Kunze kwaizvozvo zvakare kune avo vanofarira browser kodhi, vanogona kuiongorora, kurodha pasi kana kurishandura. Izvi zvinogona kuwanikwa kubva ku chinotevera chinongedzo.
Mune izvi iwe unowana zvakare mirairo yekuisirwa kwayo, kuumbiridza uye ruzivo kuti ugone kushanda zvese muhurongwa hwako hwekushandisa uye muApple Studio uye nematare eVR anotsigirwa nebrowser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox Reality 12 inosvika nerutsigiro rwekuwedzera, auto-yakazara uye nezvimwe
CODE 6.4, distro yekushandisa LibreOffice Online